Nezvedu - Xinhong Mech & Elec Co, Ltd.
Sublimation Foni Nyaya
Sublimation Chiso Masks
Heat Transfer Pepa
Yakagadzwa muna 2002, Xinhong Group yakagadzirisazve uye yakawedzera mashandiro ayo muna 2011, ichitarisa kutsvagiridzo nekuvandudza, kugadzirisa nekusimudzira michina yekufambisa yemafuta kwemakore gumi nemasere. Xinhong Group yakawana hunhu hwemadhiyimendi ekuremekedza ISO9001, ISO14000, OHSAS18001 ine zvigadzirwa zveEC (EMC, LVD, MD, RoHS) certification, uye yakawana huwandu hwemapepa epamba nekune dzimwe nyika. Boka reXinhong rinosimudzira uzivi hwebhizinesi revatengi kutanga, kukumbira shanduko, kushandira pamwe, shungu, kutendeka, uye kuzvipira. Ramba uchibva kune zvinodiwa nevatengi, tinotevedzera mafungiro ekushandira vatengi zviri nani, uye takatsunga kugadzira zvigadzirwa nekuvandudza ruzivo rwevashandisi, saka mapoka evatengi akafara anowana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakagadzikana, uye zvisingadhuri. Izvo zvigadzirwa zvakagadzirwa neXinhong Group zvine chinangwa chekubatsira mapoka mashanu evatengi. Xinhong Group nemwoyo wose inokoka ruzhinji rwevakaronga kubatana, uye kuunza zvimwe zvigadzirwa zveXinhong munyika yayo yega kuti vatengi vazhinji vagovane zvakakwirira-mhando uye zvinodhura zvinodhura!
● Zvigadzirwa & Zvekuvaraidza
Iyi nhevedzano inosanganisira EasyPress 2, EasyPress 3 uye MugPress Mate, inoshandira hunyanzvi uye mhizha vanofarira. Vashandisi vanogona kushandisa mini mavara kunyorera pamwe. Unyanzvi DIY inokodzera kukudziridza hunyanzvi pachako, kugadzirisa zvipo zviri zviviri kusimbisa hushamwari pakati peshamwari nekusimudzira kuwirirana kwemhuri
Iyi nhete yezvigadzirwa inosanganisira midziyo yekutanga, inosanganisira kupisa kupisa muchina, kapu yemuchina muchina, cap muchina, pini printer, bhora printer, shangu printer, nezvimwewo Midziyo iyi inosangana neiyo yekutanga chipo kugadzirisa uye DIY yekusika kuitisa, uye inoshanda zvakanyanya kune zvigadzirwa. senge sublimation, kupisa kwemafuta, kupisa vinyl, rhinestones uye zvichingodaro. Vashandisi vanogona kutenga maprinta akadai seEPSON uye Ricoh kuwana sublimation uye kupisa kwemafuta, kana kutenga yakakosha yekucheka chiumbwa kuti ifanane neyekupisa kupisa vinyl (HTV), iyo inoshandiswa zvakanyanya mune zvipfeko, nhumbi dzemitambo, zvipo zvinogadzirwa, nezvimwe.
● Professional Kugadziridza Hofisi kana Production
Iyi nhevedzano yezvigadzirwa zvinoshanda inyanzvi yekugadzirisa mafekitori uye zvipfeko zvekupfekedza studio. Iyo Innovation Tech ™ Series ine yakakura uye yakafanana yunivhesiti (Max. 450kg), tembiricha tembiricha (± 2 ° C), uye sitiroko yakakura (Max.6cm). Iyo yakarongedzwa zvakakwana kune akasiyana-siyana epamusoro uye akanyanya-kudzvanywa zvinoshandiswa senge ATT, Forever laser yekuendesa mapepa, chaiyo tembiricha-yekudzora zvinhu zvakaita seTPU, uye kutamiswa kunoda zvimwe yunifomu yekumanikidza, senge Chromaluxe Aluminium Panels
● Professional Textile kana Kushambadzira Fekitori
Xinhong rave zita wakavimba richipisa kuchinjirwa munda kwemakore 18, uyewo 6 makore ruzivo mune rosin dzokubudisa indasitiri. Nhasi, isu vanodada kushumira zana nezviuru makasitoma yose.
Ball Pen Heat Press Machine , Bhora Heat Press Machine , Heat Press For Pens , Heat Press Labels , Small Label Heat Press Machine , Heat Press Pen Printer ,